Dzimwe nzira Desktop Mamiriro ezvinhu haatsigirwe naDEBIAN 10 | Kubva kuLinux
Dzimwe nzira Desktop Mamiriro ezvinhu haatsigirwe neEBHIBANI 10
Dzimwe nzira Desktop Mamiriro ezvinhu haatsigirwe zviri pamutemo naDEBIAN 10
Sezvo isu tese tatoziva, iyo DEBHANI 10 meta-kugovera, ndeimwe yekare kare, yakasimba uye yakagadzika yeiyo yakazara uye yazvino seti ye Mahara uye akavhurika mashandiro chiripo, uye inowanza inotsigira inonyanya kufarirwa uye yakajeka Nzvimbo dzeDesktop (DE) anozivikanwa.
Ngatirangarirei kuti a Desktop Nzvimbo, hapana chimwe chinopfuura seti ye software inodikanwa kupa wese mushandisi weimwe Operating system, inoonekwa, ine hushamwari uye yakasununguka fomu yekudyidzana. Ndokunge, iko kuita kwe Graphical Mushandisi Yekushandisa (GUI) achida kupa nyore kuwana uye kugadzirisa, senge maturusi ekushandisa uye kusangana pakati pekushandisa, iine mashandiro akaita sekudhonza uye kudonhedza, pakati pevamwe vazhinji.
Panyaya yezvazvino DEBIAN GNU / Linux meta-kugovera, mune yazvino ichangopfuura shandurola nhamba 10, kodhi zita Buster, inotsigira zviri pamutemo kuisirwa uye kushandiswa kweinotevera Nzvimbo dzeDesktop: GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, MATE, LXDE y LXQT.
Sezvinoratidzwa zvakajeka, mumufananidzo ipapo ipapo pamusoro peiyi ndima, nekushandisa chishandiso Tasksel (Task Selector kana Task Selector). Icho chisiri chinhu kunze kwepakeji iyo inopa yakapusa interface kune vashandisi vanoda kumisikidza yavo sisitimu nekuita rimwe kana akawanda akanangana mabasa. Ichi chirongwa chinogona kushandiswa panguva ye yekumisikidza maitiro kana chero nguva, uchishandisa kana kwete, mamwe maratidziro ekutanga.
1 Mamwe maDesktop Enzvimbo
1.1 Yakadzika Desktop
Mamwe maDesktop Enzvimbo
Pakati pe Mamwe maDesktop Enzvimbo kwete kutsigirwa zviri pamutemo ne DHEBHANI 10, kureva kuti, isingatariswe nekutadza neTasksel, tinogona kutaura zvinotevera:
Deepin Desktop Nzvimbo kana DDE Ndicho Desktop Nzvimbo yakagadzirirwa kuve yekuzvarwa kana kusarudzika kweakanaka, matsva uye anoshanda Chinese Distro inonzi, Deepin. Izvi zvakatanga kugadzirwa neraibhurari GTK, iyo yaibvumidza kupa zvinoshanda zve Gnome goko nezvazvo. Ipapo ini ndinoisa raibhurari Qt5 pachinzvimbo chekupa HTML5.
Uye parizvino, yakanyorwa zvekare na DTK (Deepin Chishandiso Kit) yeiyo interface dhizaini uye kudyidzana neSystem, kazhinji. Uyezve, Dde inosanganisira yekumisikidza nzvimbo inobatanidza masystem, kutaridzika, kugadzirisa, uye sarudzo dze GRUB system specials. Zvinotarisirwa kuti inogona kuiswa pa DHEBHANI 10, pakaburitswa vhezheni iyi Deepin 20, inozovakirwa pane izvi. Kuziva zvakawanda nezve zvakataurwa Desktop Nzvimbo unogona kushanyira webhusaiti yavo yepamutemo pa: Dde.
Pantheon Ndicho Desktop Nzvimbo yakagadzirirwa kuve yekuzvarwa kana kusarudzika kwekutsanya, yemahara uye yakachengeteka North America inonzi Distro, Elementary OS. Izvi zvinoonekwa nekureruka uye modular, pamusoro pekunyorwa kubva pakutanga kunyanya mumutauro Vala uye pamwe ne toolkit GTK3.
Yakavakirwa pa GNOME asi inoshandisa goko rayo.Izvi zvinoita kuti ireruke uye iwedzere kushoma pane ino uye inosanganisirwa zvirinyore nemamwe mapurogiramu esoftware. Elementary OS Chemhondoro Plank (doko), Epiphany (webhu bhurawuza), Scratch (yakapusa chinyorwa mupepeti) kana Birdie (Twitter mutengi). Zvakare, shandisa semaneja wewindows Gala, iyo yakavakirwa pa zevezeve.
Zvinotarisirwa kuti zvichave nyore kuiswa pa DHEBHANI 10, nenzira yakatsiga, kubva pane yayo yazvino vhezheni 5.X (Juno), inowirirana ne DHEBHANI 10, kubvira vhezheni yapfuura 4.X (Loki) yakanga yakagadzika nyore nyore pa DHEBHANI 9. Kuziva zvakawanda nezve zvakataurwa Desktop Nzvimbo unogona kushanyira webhusaiti yavo yepamutemo pa: Pantheon.
Budgie Desktop Ndicho Desktop Nzvimbo yakagadzirirwa kuve yemuno kana default yakapusa, yakazvimirira uye nyore kushandisa, Irish distro kufona, Solus. Uye zvakare, inozivikanwa nekuve yemazuva ano, yakasimba, inokurumidza, inoyerera uye inogadziriswa.
Pakutanga, chitarisiko chake chakanyatsofanana GNOME 2 uye / kana MATE, kunyange yaigona kusanganisa zvinhu zve Zheve y Cinnamon. Izvi nekuti, yakavakirwa pamusoro gnome 3 asi uchishandisa mimwe mirairo kubva gnome 2. Nhasi, yakazara neruzivo uye iine rutsigiro rwechizvino tekinoroji.
Parizvino, kutaridzika kwayo pane yazvino vhezheni ye Solus inoyeuchidza iyo interface ye Windows 10. Pamusoro pazvose, maererano nebhaji repazasi senzvimbo yekuzivisa. Nongedzera kuti vamwe vashandisi ve Windows vanotanga kutyaira GNU / Linux, vanogona kukoshesa zvakanyanya.
Pakati pe3, Nzvimbo dzeDesktop akataura, iyi ndiyo iri nyore kuisa pairi DHEBHANI 10, sezvo yavo mapakeji (budgie-desktop, budgie- *) Ivo vari mune zvisirizvo zvakachengetedzwa zvakafanana. Kuziva zvakawanda nezve zvakataurwa Desktop Nzvimbo unogona kushanyira webhusaiti yavo yepamutemo pa: Budgie.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" nezve «Entornos de Escritorios» dzimwe nzira dzisina kutsigirwa zviri pamutemo ne «DEBIAN 10», mamwe acho anogona kuitwa parizvino uye mamwe kwete, asi ayo achanyatso kuve munguva pfupi iri kutevera, anonakidza uye anobatsira, «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Dzimwe nzira Desktop Mamiriro ezvinhu haatsigirwe neEBHIBANI 10
Alexander Garcia akadaro
Shamwari, warasikirwa neTatu, vhezheni yakashandurwa ye kde3 ine qt3 iri kutotora nhanho dzekuti ive Desktop Nharaunda yakazvimiririra zvachose kubva ku kde iine hurongwa hwayo libs.
Pindura kuna Alejandro Garcia
Kwazisai Alejandro! Ini ndanga ndisingamuzive, munguva pfupi ndinovimba kunyora chinyorwa chinotaura nezvake. Ndatenda nekutaura uye iyo info.
AMPPS: Yakapfava yeWebhu Yekuvandudza Nzvimbo paGNU / Linux
DOSBox: Mashandisiro aungaita DOS programming mitauro muGNU / Linux?